वाईसिएलको केन्द्रिय अध्यक्षमा यशोदा नै किन ? – Hamropahuch
वाईसिएलको केन्द्रिय अध्यक्षमा यशोदा नै किन ?
जाजरकोट । माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले भर्चुअल विधिबाट राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ । भदौ १२ र १३ गते हुने भेलाले वाइसिएलको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
वाइसिएलका वर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा) लाई पार्टीले वाइसिएलको र युवा विशेष जिल्ला समितिको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएकाले उनी बाहेकले अब वाइसिएलको नेतृत्व गर्नेछन् । हालसम्म अध्यक्ष चार जना दाबेदार छन् ।
वाइसिएलका वर्तमान उपाध्यक्षहरु सुमन देवकोटा (अब्दुल), यशोदा न्यौपाने र सुरज सिंह तथा महासचिव सुवोध सेर्पाली अध्यक्षका दाबेदार हुन् ।
कर्णाली प्रदेश निकै पिछडिएको प्रदेश हो । त्यसै मध्ये पनि कालिकोट जिल्ला झनै पिछडिएको जिल्ला हो । उमेरले १५÷१६ बर्षको हुदाँ देखि नै माओवादी आन्दोलनमा हुम्मिएकी यशोदा न्यौपाने अहिले माओवादी केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश बाट महिला नेत्रिहरु मध्ये सक्रिय नेत्रि हुन् । पार्टीले थालेको विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी बन्दै । हाल वाईसिएल नेपालको केन्द्रिय उपाध्यक्षमा काम समेत गरिसकेकी छन् ।